Fitsapana COVID-19 any Hong Kong: Tsotra, mora ary afaka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Hong Kong » Fitsapana COVID-19 any Hong Kong: Tsotra, mora ary afaka
Desambra 22, 2020
Fitsapana COVID-19 any Hong Kong
Miasa am-pahazotoana i Hong Kong mba hanatsorana azy araka izay azo atao amin'ny olona hitsapana ny COVID-19 rehefa mandeha amin'ny androny amin'ny fitateram-bahoaka izy ireo. Amin'ny famolavolana fomba fiasa hamaliana io ezaka lehibe io, ny MTR Corporation ao amin'ny Hong Kong dia nanara-maso akaiky ny valanaretina COVID-19 ary niady tamin'ny viriosy teo akaikin'ny vondron'olona.
Mba hanamorana ny programa Fanaraha-maso Laboratoara nohatsaraina ho an'ny besinimaro amin'ny fidirana amin'ny serivisy fanandramana COVID-19 miaraka amin'ny fanamorana, dia napetraka tamin'ny fiandohan'ity volana ity ireo milina mpaninjara amin'ny fiantsonan'ny 10 MTR manome kitapo fanandramana COVID-19. Taorian'ny fifandraisana tamin'ny departemantam-panjakana mifandraika amin'izany, ireo gara miisa 10 manerana ny tambajotra MTR dia fantatra fa hanome ity endrika fitsapana mety ity: Ngau Tau Kok, Kwai Fong, North Point, Tiu Keng Leng, Wong Chuk Hang, Tai Wai, tsenan'i Tai Po, Fiantsonana Siu Hong, Kowloon, ary Tsing Yi.
Kitapo fanandramana COVID-10,000 eo ho eo isan'andro no omen'ny mpandraharaha iray an'ny fanjakana ary zaraina mitovy amin'ireo masinina mpivarotra ao amin'ireny toby ireny. Ny gara dia manana famatsiana raikitra isan'andro ary ny olona tsirairay dia afaka manangona kitapo iray raha maharitra ny tahiry. Raha jerena amin'ny andro voalohany fitakiana dia fahombiazana lehibe ity programa mpanamory fiaramanidina ity satria efa amidy tamin'ny andro voalohany ireo fitaovana 19.
Ny olon-tsotra dia afaka manangona kit maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny karatra fitaterana horita any amin'ireo toeram-piantsonana mandritra ny ora fiasana. Ny "Traffic News" an'ny MTR Mobile dia manome fampahalalana momba ny famatsiana kitapom-panadinana COVID-19, ao anatin'izany na tsy feno tahiry na gara no mbola misy.
Ahoana no hiasa?
Ny spesimen'ny rora dia angonin'ny kitapo ary tsy maintsy averina amin'ny toerana natokana ho an'ny governemanta ho an'ny fanodinana. Tsy mila fotoana voatondro, fa miakatra hatrany amin'ny masinina mpivarotra mba hahazoana ny kitanao fitiliana.
Amin'ny ady amin'ny areti-mandringana, ny MTR dia mifampiresaka amin'ireo sampan-draharaham-panjakana mifandraika ary manitsy amin'ny fomba mety ny fandaminana ireo teboka fizarana mifototra amin'ny fitakiana tena izy hanamorana ny fepetra ataon'ny governemanta.
Nasiana signage tany amin'ireo gara mifandraika amin'izany mba hampatsiahivana amin'ny besinimaro ny toerana misy ireo milina fivarotana, ary ny MTR dia nanangana mpiasa fanampiny hanampiana ny fitandroana ny filaminana manodidina ny masinina mpivarotra.
Miantso ny mpikambana amin'ny vahoaka manangona ny kitapom-pitsapana COVID-19 ny MTR mba hihazonana ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fahadiovan'ny tena manokana. Ny fanadiovana sy ny famonoana otrikaretina an'ireo gara dia nohamafisina ihany koa amin'ny fiheverana ny firongatry ny olona.
Ampio ny governemanta hanampy anao
Mampahatsiahy ireo izay manana soritr'aretina na nifandray tamin'ny tranga voamarina ny COVID-19 ny MTR fa, araka ny torohevitry ny Fahefana ao amin'ny Hopitaly, dia tokony hitsidika ny sampana mpamonjy voina sy hopitaly maika ny hopitaly ho an'ny besinimaro na ny toeram-pitsaboana ankapobeny amin'ny toeram-pitsaboana haingana araka izay azo atao. ary fitsapana karakarain'ny hopitaly fa tsy manangona fonosana fanangonana santionany ho fitiliana.
Ny olona amin'ny besinimaro dia tokony hanamarika fa ny tobin'ny MTR dia hizara fitaovana fitiliana ihany. Ny daholobe dia tokony hamerina ny kitapom-panadinana any amin'ny toeram-pitsaboana 47 ivelan'ny faharetana ao amin'ny Fahefana amin'ny hopitaly na tobim-pitsaboana 13 ao amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana. Misy fampahalalana bebe kokoa ao amin'ity tranokalan'ny governemanta ity: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html